(Last Updated On: 04/10/2020)
cimilada A Mediterranean, kaabayaasha gaadiidka adag, fursado fiican in ay u safraan, iyo sidoo kale hawlaha kala duwan ee bulshada iyo wakhtiyada firaaqada ah, dhigi dalka Spain badan riyo. Waxay ku taallaa Koonfur Europe, Spain hubaal tiriyaa mid ka mid ah ugu safarada tareen muuqaal dabiici ah in Europe. Spain saadaasha hawada leh kulul, xagaa qalalan iyo khafiif ah, qaboobuhu roobaadka. Tan iyo Spain waa mid ka mid ah dalalka ugu weyn Yurub, waxa uu leeyahay in ka badan hal cimilada. Sidaas, waxaad filan kartaa jawi more qaaradda saamayn ku banka badan dhexe: in ay diyaar u kulul, xagaa qalalan iyo qaboobuhu qabow. Translation: haddii aad tahay safrin dalka Spain iyo qorsheeyaan on joogi muddo dhowr bilood ah, soo qaado dharka qubeyska iyo jaakad.
Britain – Kuwa ugu liita liiska Wadamada Yurub ee leh Cimilada ugu Fiican
Inkastoo architecturally gabi ahaanba qurux badan, taariikh ahaan iyo dhaqan ahaan, Britain ma aha mid ka mid ah dalalka Yurub oo la Weather ee Best. Well, haddii aad ku raaxaysan ceeryaamada joogto ah, roob, daruuro iyo cirro wax badan in aad ilowdo waxa midabo kale oo u eg. hawada qoyan oo ay la saadaalin Karin guud ahaan ma caawin midkood. Iyadoo Britain ma leedahay wax kadis ah qoraxdu halkan iyo halkaas, waxaan kula talin in aadan (weligaa!) baxo oo aan dalad oo dheeraad ah T-shirt. Fiiri kuwan 4 safarka tareenka daruuriga pre-safarka ee Europe ka hor inta aadan tegi on safarkaaga.
Malaha mid ka mid ah dalalka ugu cajiibka Yurub, Iceland faantaa on gacamo ay breathtaking, Bbc cagaaran sumurud dhammaadka lahayn, buuraha baraf cad, iyo waterfalls cajiib ah. Oh, ha ilaawin glaciers ay toosaa, ilaha biyaha oo kulul iyo geysers, iyo qaar ka mid ah friendliest ah, qof oo ku nool dunida oo dhan! Si kastaba ha ahaatee, nasiib daro, dalkaan Scandinavian waa caan ah ay hawada la saadaalin karin iyo wiswis. Iceland ayaa ku dhowaad 320 maalmood daruuraha qarada waaweyn cirro, 215 maalmood roob, snowstorms, oo soconkara. Dantiinna ma aha kuwa raadinaya in ay ku raaxeystaan ​​vacay qoraxdu.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/europe-countries-best-weather/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)